Ungawuqalisa Kanjani Umkhankaso Wokumaketha Isiginesha Ye-imeyili Oyimpumelelo (ESM) | Martech Zone
Uma usebenzela inkampani enabasebenzi abangaphezu koyedwa, kunethuba lokuthi inkampani yakho isebenzise amasiginesha e-imeyili ukuphatha nokushayela ukuqwashisa, ukutholwa, ukuphakanyiswa, kanye nezinhlelo zokugcinwa kodwa ukwenze ngendlela engaphazamisi. Abasebenzi bakho babhala futhi bathumela ama-imeyili angenakubalwa nsuku zonke kumakhulu, uma kungenjalo izinkulungwane, zabamukeli. I-real estate kuyo yonke i-imeyili engu-1: 1 eshiya isiphakeli sakho se-imeyili yithuba elihle elingavamisile ukusetshenziswa.
I-imeyili ngayinye ethunyelwa umsebenzi inethuba lokufakwa uphawu olufanele ngesiginesha enhle, futhi inikeze nesicelo sokubizela esenzweni sokuqwashisa ngemiklomelo, imikhiqizo, izinsizakalo, njll. Okungenzeka ukuthi amathemba akho noma amakhasimende akho angakwazi. Isixazululo ukufaka phakathi nendawo nokwakha isu elizungeze ukuthumela amasiginesha e-imeyili enkampanini yakho.
Kuyini Ukumaketha Isiginesha Ye-imeyili (ESM)?
Ukumaketha Isiginesha Ye-imeyili (ESM) umkhuba wokusebenzisa isiginesha yakho ye-imeyili ngezinjongo zokumaketha njengokukhulisa ukuqwashisa ngomkhiqizo nokwenza ngcono i-CTR yama-imeyili okufinyelela nawokumaketha webhizinisi lakho.
Ungawenza Kanjani Umkhankaso Wokumaketha Isiginesha Ephumelelayo we-imeyili
Ukuhlanganiswa Kwehhovisi Kuyadingeka
Amasiginesha e-imeyili ngokuvamile alawulwa ngabasebenzi endaweni yangakubo namapulatifomu ejwayelekile webhizinisi afana neGoogle noma iMicrosoft Office awanamandla okuphatha maphakathi nefomethi ye-imeyili yomuntu ngamunye. Noma nini lapho kunegebe elinjengaleli, amasu amasha okubonga angene emakethe - umholi oyedwa ukhona Isitembu esisha. INewoldstamp iyipulatifomu eyodwa yokuphatha amasiginesha wabasebenzi nokusiza iqembu lakho ukwenza ngcono ukuxhumana namathemba namakhasimende.
INewoldstamp yisixazululo esizenzakalelayo esigcwele esingadingi zenzo ezivela kubasebenzi bakho. Cindezela zonke izinguquko kusuka kudeshibhodi yethu ngqo kuzilungiselelo zeklayenti labo le-imeyili. Vumelanisa ngokuzenzakalela idatha kusuka ku-Directory Esebenzayo noma Indawo Yokusebenzela yakwaGoogle (Ngaphambilini i-G Suite) Uhla lwemibhalo lokwakha amasiginesha ngokuya ngesifanekiso esisodwa.
Izinzuzo Zokumaketha Isiginesha Ye-imeyili
Izinzuzo zokumakethwa kwesiginesha nge-imeyili ukuthi izinhlangano zinga:
Sakaza amasiginesha e-imeyili angahambisani nomkhiqizo kubo bonke abasebenzi benkampani abalandela imihlahlandlela yakho.
Khulisa ukuguqulwa kokumaketha nokuthengisa ngokusebenzisa ukuxhumana nge-imeyili yebhizinisi lakho nokusebenzisa imikhankaso yesiginesha ye-imeyili.
Phatha wonke amasiginesha e-imeyili kusuka kudeshibhodi eyodwa. Isiginesha ye-imeyili esheshayo nelula imisiwe.
Hlanganisa isiginesha yakho ngaphandle komthungo namakhasimende amakhulu e-imeyili namadivayisi eselula, i-Google Workspace (Ngaphambili i-G Suite), i-Exchange, i-Microsoft 365.
Akungabazeki ngokusebenza kwe-ESM. Imbuyiselo yotshalomali lwe-ESM inkulu kakhulu - iNewoldstamp ibone kuze kube kufayela le- 34,000% imbuyiselo ekutshalweni kwemali endaweni yabo yesikhulumi. Lezi zingxenyekazi zingasetshenziselwa ukuhlukanisa ukuxhumana ngokuya ngezibopho zabasebenzi bakho futhi ulandelele ngokunembile impendulo yaleyo mikhankaso.
Ungawuqalisa Kanjani Umkhankaso Wokumaketha Isiginesha We-imeyili Oyimpumelelo
Ithimba laseNewoldstamp lenze lesi sinyathelo ngesinyathelo infographic esihamba ngezinyathelo eziyi-7 zokuqalisa umkhankaso wesiginesha we-imeyili ophumelelayo.
Thola indawo yamasiginesha e-imeyili kucebo lakho lokumaketha
Hlukanisa izethameli zakho
Chaza izinjongo zomkhankaso wokumaketha wesiginesha we-imeyili
Thuthukisa ukwakhiwa kwamasiginesha e-imeyili ngomqondo engqondweni
Hlela imikhankaso yakho
Landelela imikhankaso yakho yokuthengisa yesiginesha ye-imeyili
Lungiselela imikhankaso ngokusho kwale datha
Ukudalula: Ngisebenzisa isixhumanisi esihambisanayo se- Indawo Yokusebenzela yakwaGoogle.
Tags: isiqondisi esisebenzayoctaisignesha ye-imeyliukuphathwa kwesiginesha ye-imeyiliukumaketha kwesiginesha ye-imeyiliipulatifomu yesiginesha ye-imeyiliesmExchangeindawo yokusebenzela yakwa-googlekhulisa ukuguqulwainfographicukushintshaniswa kwe-microsoftI-Microsoft Officeisitembu esishaihhovisi 365